Famolavolana ho olom-pirenena vanona: tokony ho laharam-pahamehana ny fanabeazana | NewsMada
Famolavolana ho olom-pirenena vanona: tokony ho laharam-pahamehana ny fanabeazana
Miainga amin’ny fanabeazana ny fampandrosoana. Kely ny ezaka atao amin’ny fampandrosoana ary kely ny famatsiam-bola, ho kely koa ny ezaka atao amin’ny fandriampahalemana ary kely ny vola mety ho lany amin’izany rehefa homena lanja ny fanabeazana.
Io no fanehoan-kevitry ny mpampianatra, mpanabe, Ratrema William, omaly. Tokony hataon’ireo kandidà nanolo-tena hanompo firenena ho vaindohan-draharaha ny fanabeazana ao anatin’ny drafitrasam-pampandrosoany
Amin’izao fotoana izao, mifanohitra amin’izany ny zava-misy satria atao ambanin-javatra ny ezaka atao amin’ny fanabeazana ka lasa betsaka sy mitombo ny vola lany amin’ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana.
Any amin’ny firenena mandroso sy matanjaka toa an’i Allemange, i Japon, i Corée du Sud, manao lohalaharana ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ary ny mponina manontolo ao aminy ka mandeha ho azy ny fampandrosoana sy ny fandriampahalemana.
Tamin’ny taona 80 teto amintsika, naato ny fandraisana mpampianatra mpiasam-panjakana, nakatona ny sekoly manofana mpampianatra ka naka mpampianatra tsy voaofana nampianatra ny zaza malagasy, tsy ampy ny fahalalana akademika sy ny fampitana fahalalana.
Mioty ny vokatr’izany isika amin’izao fotoana izao. Voavolavolain’ireo mpampianatra tsy ampy fahalalana ny tanora tamin’izany ka lasa mibirioka sy mivaona ary lasa miteraka tsy fandriampahalamena sy lasa mpaniratsira.
Napetraka ny drafitrasam-pampianarana isan-karazany teto amintsika, toy ny Map, ny PSE… Na tsara tahaka ny inona aza izany drafitrasa sy ny fametrahana ny tetipivoarana vaovao izany kanefa tsy tsara ofana ny mpampianatra, kely karama, tsy manana risi-po sady ratsy fiofanana, zava-poana ihany izany.
Tokony ho vaindohan-draharaha ny fanofanana mpampianatra ifotony. Raisin’ny fanjakana an-tanana ny fanofanana ireo mpampianatra noraisina ho mpiasam-panjakana mba hamolavola ankizy sy tanora vanona sy tompon’andraikitra ka ho mora foana ny fampandrosoana.